टाँकीका फूलहरूमाथि विमर्श - चौतारीपोष्ट अनलाईन
डा. रमेश इजमले कथाले पाठकलाई तान्न सक्ने सामथ्र्य रहेको बताए । कथाकार शरण राईले हरेक कथा पढ्दा बेग्लाबेग्लै प्रभाव पार्ने बताए। प्रा.डा. टङ्क न्यौपाने अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र धरानको आयोजना तथा हङकङ साहित्यिक साझा शृङ्खलाको सहआयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण राजेश विद्रोहीले गरेका थिए ।
कथाकार गुरुङको तेस्रो संस्करणको रूपमा प्रकाशित भएको कथा सङ्ग्रहमाथि वक्ताहरूको टिप्पणीलाई बरिष्ठ कवि अनिल पौडेलले धन्यवाद ज्ञापन गरे । केन्द्रका अध्यक्ष गोविन्द तिम्सिनाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा भाषाविद् प्रा.डा. टङ्क न्यौपानेलगायत सहभागी थिए । ब्लाष्ट खबर
Prev‘जिउँदै जल्नुजस्तो पीडा अरु के हुन्छ र?’
Nextप्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया पर्खिंदैै कोशी पीडित